Ma jirto sharaf la'aan xorriyadda: Waxaan doorbidnay xorriyadda saboolnimada iyo taajirnimada addoonsiga | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 5, 2017 00: 40 1 Comment
Soo xigashadani waa fursad lagu waydiin karo dhowr su'aalood:
- Runtii miyaa ra'iisal?
Kahor jawaabta su'aashan, waa inaan fahamnaa waxa loogu yeedhay "Hawlagallo civilizing ". Inaad ka baxdo wadankiisa si aad u dhisto dadweynaha waa tallaabo cunsuri ah. Waa maxay sababta? Sababta oo ah waxay ka dhigan tahay inaad tixgeliso in dadkaagu yihiin, oo aad u diido dad kale, awoodda ay u leeyihiin inay u dhisaan ilbaxnimo inay adiga ku dabaqaan.
Warbixintani waxay ku khasbeysaa dadka la gumaysto inay u bogaan dhaqan iyaga oo iskaashanaya isla markaana aaminsan in ay jirto hal waddo oo loo maro "ilbaxnimo".
Tan iyo qarniyadii 6, waxqabadka ayaa isbeddelay: addoonsiga, gumaysiga, isdifaacidda, neo-qabsashadda, adduunka
Waxa loo baahan yahay waa dhamaadka mas'uuliyadda ee maahan wareejinta, marka maya, annagu xor ma nihin!
- Miyaynu istaahilnaa?
Si aan uga jawaabno su'aashan, waa inaan ilaalinaa dhaqamadeena kala duwan maanta:
Qaarkood waxay u shaqeeyaan sidii ay ula xiriiri lahaayeen jir ahaan iyo ruux ahaanba dhaqankii awoowayaasheen si ay uhelaan tusaale Afrikaan ah: waa sharaf.
Kuwa kale waxay dhihi doonaan waa Beljam, Faransiis, Talyaani, Ingriis waxayna u dagaallamaan noloshooda oo dhan si ay u aqbalaan kuwii fuliyay xukunkoodii hore. Waxay si ba'an ugu dhexjiraan jawi cadaawad leh waxayna dhihi doonaan mar dambe dheg uma dhigin cunsuriyada, si kale: waxay aqbaleen wax aan la aqbali karin maaddaama addoonku aqbalay addoonsiga illaa iyo inta aan la garaacin. Ilaa inta ay shaqeyn karaan, oo ay iibsan karaan Louis V iyo shirkadaha, waxay u maleynayaan inay bilaash yihiin.
Aaway maanta Taleexyadii Sékou Toures?
19 / 06 / 2018 10 h 53 min
Maaha wax aan ahayn in Afrika lafteeda ka hesho xarunta adduunka. Runtii, xitaa Faransiiska, dad badani waxay ku nool yihiin silica… Maaddaama aan u adeegno sidii muraayad, dhibaato kasta oo qaaraddan ka jirta waa dhibaato caalami ah oo aasaasi ah, maxaa yeelay dhammaanteen waxaan ku siman nahay isla meeraha Dhulka ... Haddii addoonsiga uu gacan ka geystay daciifinta Dalkan ayagoo keenaya kaligood iyo gumeysi si ay gacan uga geystaan ​​daciifinta aabaheena ayagoo kusii haya guriga, is dhiibida: isimiska wuxuu daciifinayaa aduunka oo dhan isagoo ku soo rogaya hal rabitaan, badanaaba qalab kudhisan dadyowga kaladuwan ... Si kastaba ha noqotee qaraar ama tabaruc... Akhri wax dheeraad ah "
Sep29 09: 24